I-Yas Island Etihad Arena yamkela inkwenkwezi ye-Bollywood uArijit Singh
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ukonwatyiswa » I-Yas Island Etihad Arena yamkela inkwenkwezi ye-Bollywood uArijit Singh
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Ukubonakala kwemvumi eyaziwa ngokuba yi-Bollywood kwi-Yas Island iya kuba yikonsathi yakhe yokuqala kwikomkhulu le-UAE iminyaka emihlanu.
Imvumi ethandwa kakhulu kwi-Bollywood, uArijit Singh, uza kudlala e-Etihad Arena ngo-Novemba 19, 2021.
Le iya kuba yikonsathi yokuqala ka-Singh e-UAE kwiminyaka emi-5.
Kuza kugcinwa amanyathelo angqongqo ezempilo nokhuseleko kuyo yonke indawo yokubhalela.
Isiqithi sase-Yas i-Abu Dhabi, enye yeendawo zokuzonwabisa eziphambili kunye nokuzonwabisa, ngokusebenzisana neSebe leNkcubeko kunye nezoKhenketho- e-Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), kunye nePortfolio Managing Events (PME), iyakwamkela imvumi edumileyo yaseHollywood, uArijit Singh , ukwenza i-Etihad Arena ngo-Novemba 19, 2021. Abalandeli be-Bollywood mega-star bakwimeko engenakuphikiswa kamva kulo nyaka.
Enye yeemvumi eziguquguqukayo zeli xesha langoku, ukubonakala kukaSingh kwisiQithi saseYas kuya kuba yikonsathi yakhe yokuqala kwikomkhulu le-UAE iminyaka emihlanu. Uza kube esenza kumgangatho ophezulu Indawo yeEtihad, eyona ndawo inkulu yokuzonwabisa ngaphakathi ngaphakathi kuMbindi Mpuma.
Ngezwi elifanayo ne-Indian Cinema, imvumi ye-Bollywood kunye nomqambi uya kwenza iingoma zakhe ezininzi ezithandwayo, kubandakanya 'Tum Hi Ho', 'Kabira', 'Ae Dil Hai Mushkil', nangaphezulu, noluhlu lweemvumi zehlabathi Ukujoyina iqonga.
"Injongo yethu kulo nyaka kukubuyisa ngokukhuselekileyo iminyhadala kunye neekonsathi kwikomkhulu le-UAE ukuze abahlali kunye neendwendwe bazonwabele, kwaye kuyasivuyisa ukuququzelela lo msitho ukhethekileyo," utshilo u-Ali Ali Al Shaiba, uMlawuli oLawulayo Ezokhenketho kunye neNtengiso kwi-DCT Abu Dhabi. “UArijit Singh ngumzobi okrelekrele osoloko ebakhuthaza abaphulaphuli ngomdlalo wakhe, nto leyo emenza ukuba akhethe kakhulu ikonsathi e-Etihad Arena eYas Island. Abalandeli abakhoyo banokonwabela uthotho lwentsebenzo kunye nezibonelelo ezifumanekayo kwiYas Island, ukubanika amava okuzonwabisa ngexesha lokugubha, ngelixa baqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi, abahlali kunye neendwendwe yinto ephambili.
Kuza kugcinwa amanyathelo angqongqo ezempilo nokhuseleko kuyo yonke indawo yokubhiyozela, ngokuhambelana nayo yonke imigaqo-nkqubo ekhoyo ngoku. Ukongeza, ukuhlala kwe-pod kwenzelwe usapho kunye nabahlobo ukuba bonwabele ikonsathi ngelixa bephambuka ekuhlaleni kwamanye amaqela. Indawo yokuhlala e-Etihad Arena iya kuncitshiswa kunye nendawo yokuhlala pod. Njengolumkiso olongezelelekileyo, ukugquma ubuso kunyanzelekile kuzo zonke iindwendwe ngaphandle kwaxa kusitya okanye kuselwa ezihlalweni zazo, ngokwesikhokelo sikarhulumente. Iindwendwe ezisusela kwiminyaka eli-12 ukuya kweli-16 ubudala ziya kufuna uvavanyo olubi lwe-PCR kunye nokusebenza kweeyure ezingama-48. Iindwendwe ezineminyaka eli-16 nangaphezulu kufuneka zigonywe ngokupheleleyo kwaye zinike ubungakanani "E" okanye "*" kwi-Al Hosn app kunye novavanyo olubi lwe-PCR ngokusebenza iiyure ezingama-48.